Mihinana ve ireo soavaly? Torolàlana hamahana azy ireo tsara | Soavaly Noti
Monica sanchez | | sakafo
Mihinana ve ireo soavaly? Vao nahazo soavaly na naka soavaly ianao ary tianao ho salama mandrakizay? Na dia izany aza, indrisy, tsy azo atao izany satria tsy ho afaka hiaro azy amin'ny zavamiaina bitika sy katsentsitra rehetra izay mety hanimba azy isika. azonay omena anao ny sakafo faran'izay tsara mba hahazoanao hery fiarovan'ny vatana malemy. Amin'izany fomba izany dia ho afaka ny ho sitrana mora kokoa amin'ireo aretina mety hisy fiatraikany amin'ny fiainanao manontolo ianao.
fa, mihinana ve ny soavaly? Raha sambany isika manana an'ity dia azo antoka fa hanana fisalasalana betsaka momba ity olana ity isika, ka hiezaka hamaha azy rehetra eto ambany.
1 Karazana biby inona ilay soavaly?
2 Inona no fihinan'ny soavaly?
3 Sakafo firy kilao no homeko azy?
4 Mila mitandrina amin'ny sakafo sasany ve ianao?
Karazana biby inona ilay soavaly?
Sary - Myhorse.es
Ny namantsika manana tongotra efatra dia biby mampinono manana kofehy, izany hoe manana hoho. Noho izany dia tsy afaka mahazo haza izy, ka manjary azo atao remby. Inona koa, ny valanoranony dia natao hitsako ahitra, fa tsy ruminant toy ny omby musk, fa afaka mihinana voninkazo sy voankazo ihany koa.
Ny rafi-pandevonan-kanina anao, raha hitantsika amin'ny sary izy dia mety ho toa tsy mitovy amin'ny antsika ary ny marina dia izany. Ary izany dia, raha omnivores isika, herbivore izy. ATSINANANA manomboka amin'ny vava. Ao anatiny, ny sakafo dia mitsako ary afangaro amin'ny rora avy eo mba hiditra ao amin'ny esophagus, izay miafara amin'ny valizy antsoina hoe cardia izay manokatra amin'ny làlan'ny vavony ihany. Ity mampiavaka ity dia midika fa ny soavaly tsy afaka milomano na mandoa, ka mety mijaly amin'ny fivontosan'ny vavony na colika ianao.
El vavony Mizara roa lehibe izy io, ny glandular sy ny tsy glandular. Manana habaka 15 litatra eo ho eo izy ary pH tena asidra: eo anelanelan'ny 1.5 sy 2, ilaina mba hahafahana mandray ny proteinina avy amin'ny ahitra. Mandalo an'ity taova tena ilaina ity dia hitantsika ny tsinay kely, izay mizara amin'ny duodenum, jejunum ary ileum, ary manana ny halavany 21-25m eo ho eo. Ny pH dia ambany ihany koa, saingy somary avo kokoa: eo anelanelan'ny 2.5 sy 3.5. Ao anatiny, saika ny otrikaina rehetra no voadoka: tavy, gliosida ary mineraly ao anaty ileum.
Farany, hitantsika ny tsinay lehibe, izay mizara amin'ny cecum, colon ary ny rectum. Sahabo ho 7 metatra ny halavany ary manana pH eo anelanelan'ny 6 sy 7. 400 karazana zavamiaina bitika isan-karazany monina eto izay tompon'andraikitra amin'ny fitrohana ny fibre amin'ny sakafo nohanin'ny soavaly.
Ny fizotrany manontolo, izany hoe, rehefa miditra ao am-bava ny sakafo mandra-pandroakany amin'ny vala mety haharitra 22 ora ka hatramin'ny 2 andro izany, arakaraka ny kalitao anananao sy ny habetsanao nohaninao.
Inona no fihinan'ny soavaly?
Mba hahasalama anao tena zava-dehibe ny fanajana ny vatan'ny biby tsirairay. Raha ny soavaly, satria mpamboly zava-maniry izy dia tsy misy dikany ny manome azy, ohatra, ny hena satria, ankoatry ny fandaniam-potoana sy vola, ny vatany dia tsy hahafantatra ny handevona azy tsara. Noho izany, tsy maintsy omenao ahitra, voninkazo ary voankazo izy.
Ireto misy manaraka indrindra ny sakafon-tsoavaly:
oats: manankarena amin'ny proteinina, tavy ary starch. Io no loharanon'ny angovo soavaly.
Vovoka tongolo lay: Antiparasitika voajanahary mahery mahery vaika izay, satria tsy misy vokany ratsy ho an'ny Equine, dia azo omena tsy tapaka.
Ny vary hordea: manampy anao hitazona endrika.
Hay: ilaina mba hananan'ny soavaly ny angovo ilainy.
Voankazo sy faka: manome vitamina sy mineraly izy ireo.
linseed: manan-karena proteinina izy ary manana fananana manentana. Tsy maintsy omena masaka.
Katsaka: manome angovo be dia be, saingy ambany proteinina ary mety tsy ho levona.
mineraly- Tsy takiana ireo fa indraindray mety ilaina ny mamatsy ny mineraly ho famenony.
Voavonjy varimbazaha: 1kg isan'andro dia ampy.
Sakafo firy kilao no homeko azy?
Ny soavaly dia mila mihinana imbetsaka isan'andro, saingy tadidio fa kely ny vavony ary tsy afaka manome azy be dia be isika. Ho tsara kokoa hatrany ny manome azy 1,8 kilao ambony indrindra amin'ny famahanana 3 na 4., noho ny manome azy 3 na 4kg indray mandeha.
Ankehitriny, raha avelantsika hihinana malalaka izy, dia ho hitantsika fa afaka mandany sakafo eo anelanelan'ny 15 ka hatramin'ny 18 ora isan'andro izy, ka tsy ilaina ny manome sakafo bebe kokoa azy (afa-tsy, mazava ho azy, te hanome azy isika fitsaboana miendrika karoty ohatra indraindray.
Mila mitandrina amin'ny sakafo sasany ve ianao?
Ny marina dia eny, indrindra amin'ny alfalfa satria manankarena be amin'ny proteinina. Ho fanampin'izay, ny tahan'ny kalsioma / fosfor dia ambony noho izay ilain'ny biby. Izany dia mety hiteraka fikajiana ny taolana sy ny fananganana vato ao amin'ny tsinay. Tsy tokony hanararaotra serealy koa ianao- Be loatra ny antony mahatonga ny fery, kiritika na fitomboan'ny insuline insuline.
Manantena izahay fa ity lahatsoratra ity dia nahasoa anao ary efa nianaranao zavatra betsaka momba izany mihinana izany soavaly izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » sakafo » Mihinana ve ireo soavaly?
Ahoana ny fanabeazana soavaly?
Manonofy momba soavaly